Information for Myanmar about Islam: မမေးလည်းဖြေ (၁) – ချစ်တီးကုလားလို မြန်မာပြည်ကိုငွေနဲ့သိမ်းမှာကြောက်ရင်
မမေးလည်းဖြေ (၁) – ချစ်တီးကုလားလို မြန်မာပြည်ကိုငွေနဲ့သိမ်းမှာကြောက်ရင်
မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးရေးသမားတွေ လူသိရှင်ကြား နှိမ်ချရေးသားနေတာတွေကို သေချာ လိုက်ဖတ် ကြည့်တော့ နားလည်မှု လွဲနေ တာတွေ အများကြီးတွေ့ ရတယ်။ တချို့ က နားမလည်လို့ကြားဖူးနားဝ နဲ့ အမြင်မှားနေပေမဲ့ တချို့ ကျတော့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး မုန်းတီးအောင် သက်သက်မဲ့ သတင်းမှား တွေနဲ့မှိုင်းတိုက်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် မမေးလည်းဖြေ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့တခုချင်း စီ ဖြေသွားပါ မယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ခုနကတင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်မိတဲ့ ကော်မန့် နဲ့စချင်ပါတယ်။
ညီမငယ်လေးတစ်ယောက် က “ဟ ချစ်တီးကုလားတွေသွား ကြည့်ပါလား။ ငွေနဲ့ ပေါက်ပြီးသိမ်းသွားမယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ မမေးပေ မဲ့ဖြေပါမယ်။ ချစ်တီးနဲ့မွတ်စလင်မ်ရောချတာ လုံးဝ လုံးဝ အဓိပ္ဗါယ် မရှိပါ။ မွတ်စလင်မ်နဲ့ငွေချေးချစ်တီးဆိုတာ ပြဒါးတစ်လမ်း သံ တစ်လမ်းပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ?
(၁) မြန်မာတွေကို ကိုလိုနီခေတ်တုန်းက ငွေတိုးချပေးတဲ့ ချစ်တီးတွေက မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယ တောင်ပိုင်း တမီနာဒူးက လာတဲ့ ဟိန္ဒူ ဇတ်အနွယ်ဝင်တခုကဖြစ်ပါတယ်။ Sean Turnell ရဲ့ Fiery Dragons: Banks, Moneylenders and Microfinance in Burma စာအုပ် အခန်း ၂ မှာဖတ်ပါ။
(၂) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်မ်တွေကို ငွေတိုးမစားဖို့ကျမ်းစာမှာ အတိအလင်း ပိတ်ပင်ထား တယ်။ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ အပိုဒ် ၂း၂၇၅ မှာ
“အတိုးအညွန့်စားသူတို့သည် (ရှင်ပြန်ထမည့်နေ့တွင် သင်းချိုင်းတွင်းမှ ထကြသောအ ခါ) ကောင်းမွန် စွာမရပ်နိုင်ကြ ဘဲ ရှိုင်တွာန် [မိစ္ဆာ] ဖမ်းစား၍ အသိဥာဏ်မှောက်မှား ရူးသွပ်တွေဝေေ နသူများကဲ့သို့ သာလျှင် ရပ်ကြကုန်အံ့။ [… ] အမှန်စင်စစ်သော်ကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ကုန်စည်ကူး သန်း ရောင်းဝယ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားတော်မူ၍ အတိုး အညွန့်စားခြင်းကိုမူကား တားမြစ်တော်မူခဲ့လေသည်။ […] သို့ရာတွင် အကြင် သူတို့သည် […] (အတိုးအညွန့် စား ခြင်းကို) ပြုကြပါမူ ထိုသူတို့သည် ငရဲသားများ ပင် ဖြစ်ကြကုန်၏။ ထိုသူတို့ သည် ငရဲမီးတွင် ထာဝစဉ် (ဒုက္ခကြီးစွာ) ခံစား နေထိုင် ကြရမည့်သူများ ဖြစ်ကြကုန် သတည်း။”
ဒီတပိုဒ်နဲ့ တင် မွတ်စလင်မ်နဲ့ချစ်တီးတွေနဲ့ဘာမှမဆိုဘူးဆိုတာ ထင်ရှားလောက် ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ချစ်တီးအ ကြောင်းတွေးပြီး လက်ရှိ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေကို မုန်းတီးနေခြင်းက အခြေအမြစ်မရှိ၊ ယုတ္တိမဲ့နေပါတယ်။ (အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုရ်အာန် ကျမ်းစာက ဘာတွေထပ်ပြောထားလဲဆိုတာ သိချင်သမားများအတွက် အဆုံးမှာ ဆက်ဖတ်ပါ)။
ဘာသာတရားတိုင်းမှာ လူဆိုးနဲ့လူကောင်းတွဲပြီး ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာသာတရားတိုင်းကလည်း ကောင်းတာကို ပဲ သင်ပါတယ်။ လူကောင်းတွေက ကောင်းတာပြော၊ အကောင်းမြင်လို့ ကောင်းတာပဲ လုပ်ကြသလို လူဆိုးတွေက လဲ အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ အခြား ဘာသာဝင်တွေကို အဆိုးမြင်လို့ အဆိုးပြော ရင်း အချိန်ကုန်နေလေ့ရှိကြပါတယ်။ တ ကယ်တော့ ကိုယ့်ဘာသာတရားက ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ အောင်သင်ထားတဲ့ အတိုင်း ဘာသာတရားတိုင်း၊ လူမျိုး တိုင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းက ကျင့်ကြံရင် ကမ္ဘာကြီး တကယ်ကို အေးချမ်းနေမှာပါ။
တစ်ခါ…အတိုး ကို ခါးခါးသီးသီး တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ သာသနာက အစ္စလာမ်သာသနာပါ။ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ က မနေ့ တနေ့ကမှ ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၁၄၀၀ကျော်က တည်းကပါ။ အဲ့ဒီအချိန်တည်း က အတိုးစားခြင်းကို တားမြစ် ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ အတိုး စားတယ် ဆိုပြီး ပြောလို့ ထပ်ပြောရ ရင် အစ္စလာမ်မှာ အတိုးကိုတင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပိတ်ပင် ထားတာ မဟုတ် ပါဘူး။ ကိုယ့်ဝေစုထဲက အချို့ကိုတောင် မပေးမနေရ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးလှူဖို့ သင်ထားတဲ့ တစ်ခု တည်းသော သာသနာပါ။ ကိုယ့်ဝေစုထဲကနေ မရှိဆင်းရဲသားတွေ၊ မုဆိုးမတွေ၊ မိဘမဲ့ကလေး သူ ငယ်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ကို မျှဝေ လှူဒါန်းရမတဲ့ဗျာ။ လှူချင်တဲ့ခါလှူ မလှူချင်တဲ့ခါ မလှူပဲနေ လို့ မရပဲ ဇကာတ်လို့ ခေါ်တဲ့ ဒါနကြေးကို ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှု ရဲ့ အချိုးအစားအတိ အကျ အလိုက် မပေး မနေရ ပေးဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကုရ်အာာန် အပိုဒ် ၉း ၆၀ မှာ ဒီလို မိန့် ထားပါတယ်
“မုချဧကန် ဇကာတ် [တရားဝင်ဒါနကြေး] သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတို့အဖို့ လည်း ကောင်း၊ ပစ္စည်းမဲ့ များအဖို့လည်း ကောင်း၊ ဇကာတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စအ၀၀ ကို ဆောင်ရွက်သည့် အမှုထမ်းများအ ဖို့လည်းကောင်း၊ အစ္စလာမ် သာသနာတော်၏ တ ရား များကိုနှစ်သက်၍ သာသနာဘောင်တွင် ၀င်လို သူများ၏ စိတ်ကို နှစ်သိမ့်စေ ရန် အလို့ငှာ လည်းကောင်း၊ ကျေးကျွန်များကို ကျွန်ဘ၀မှ လွတ် မြောက်စေရန် လည်း ကောင်း၊ မြီစားများအဖို့ လည်းကောင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏လမ်းတော်၌ လည်းကောင်း၊ (ဒုက္ခရောက်နေသော)ခရီးသည်များအဖို့လည်းကောင်းဖြစ်သည်။ ‪ဤသည် ကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အထံတော်မှ ပြဋ္ဌာန်း ထားတော်မူသော ပညတ်တော်ဖြစ်သည်။”
အတိုးပေးငွေချေးတဲ့ စနစ်ကြောင့် လူဆင်းရဲတွေ ဒုက္ခရောက်ကြလို့နိုင်ငံတကာ အသီးသီး ဥပ ဒေတွေထုတ်၊ စည်းကမ်းတွေချ၊ ဒီလိုပဲ ၀င်ငွေပြန်ဖြန့် ဝေဖို့နိုင်ငံတော်အခွန်ငွေဥပဒေတွေပြဌာန်၊ အခွန်တွေ ကောက်ကြပါ တယ်။
အတိုးမစားဖို့ လိုအပ်တဲ့လူကို ဒါနကြေးမပေးမနေပေးဖို့လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်ကတည်းက အစ္စလာမ်က ပြဌာန်း ထားပြီးသားပါ။ ဘယ်လောက် လူသားဆန် တဲ့၊ မေတ္တာတရားနဲ့ ဖေးမကူတတ်ဖို့ သင်ထားတဲ့ သာသနာလဲဆိုတာ တွေးဆ ဆင်ခြင် ကြည့်နိုင်ကြပါစေ။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အတိုးအညွန့်ကို ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးစေတော်မူ၍ (ပေး ကမ်း စွန့်ကြဲသုံးစွဲ ကြကုန်သော) အလှူ ဝတ္တုများကိုမူ (ဆထက် ထမ်းပိုး) တိုးပွား စေတော်မူ၏။ ‪မှန်သော်ကား အလ္လာဟအရှင်မြတ်သည် ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါတရား ကင်းမဲ့သော ပြစ်မှုဒုစရိုက်များ ကျူးလွန်သော မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ နှစ်သက်တော်မူ သည် မဟုတ်ချေ။ (၂း၂၇၆)
အို-ယုံကြည်သူ အပေါင်းတို့၊ အကယ်၍ အသင်တို့သည် ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြပါမူ၊ အလ္လာဟ်အ ရှင်မြတ်ကိုကြောက်ရွံ့လေးစား ရိုသေ ခန့်ညားကြကုန်၊ ၄င်းပြင် ကြွင်း ကျန်လျက်ရှိသော အတိုး အညွန့်များကိုလည်း စွန့်လွှတ်ကြကုန်။ (၂း ၁၇၈)
တဖန် အကယ်၍သာ အသင်တို့သည် [အတိုးအညွန့် မစားရန်အမိန့် ကို မလိုက်နာ] ခဲ့ ကြပါမူ အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နှင့်လည်း ကောင်း၊ ထို အရှင်မြတ်၏ [တမန်တော် မိုဟာ မတ် - Peace Be Upon Him] နှင့်လည်းကောင်း၊ စစ်မက် ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရန် အဆင် သင့် ရှိကြကုန်။ သို့ရာတွင် အကယ်၍သာ၊ အသင်တို့သည် နောင်တ တရား ရရှိကာ(အတိုးအညွန့် စားသုံးခြင်းကို စွန့်လွှတ်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်သို့) ပြန် လှည့်ကြပါလျှင် အသင်တို့ သည် မိမိတို့(ချေးငှားထားသော) ငွေရင်းများကို ပိုင်ဆိုင် ခွင့်ရှိကြကုန်၏။(မတည်ငွေရင်းများထက် ပိုမို၍ အတိုးအညွန့် မယူခြင်း အားဖြင့်) အ သင်တို့သည် (သူတစ်ပါးကို) မတရား ဆုံးရှုံးနစ်နာစေကြမည်လည်းမဟုတ်၊ (မိမိတို့ ၏ မတည်ငွေရင်းများကို ပြန်လည်ရရှိခြင်း အားဖြင့် သူတစ်ပါးတို့၏) မတရားဆုံးရှုံး နစ်နာစေခြင်းကို လည်း ခံကြရမည်မဟုတ်ပေ။ (၂း ၂၇၉)
အို- […] ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါတရား ထားရှိသူအပေါင်းတို့။ အသင်တို့သည် ဆထက် တိုးပြီးဖြစ်သော၊ ဆပေါင်းများစွာသော အတိုးအညွန့်ကို မစားကြကုန်လင့်။ (၃း ၁၃၀)
ထို့ပြင်တ၀ ထိုသူတို့၏ အတိုးအညွန့်ကိုယူငင်(စားသုံး)မှုကြောင့်၎င်း၊ အမှန်မှာ ထိုသူ တို့သည် ထို(သို့ အတိုးအညွန့်စား သုံးခြင်း)မှ မြစ်တားခြင်းခံခဲ့ကြရပေပြီ။ သူတစ်ပါး တို့၏ဥစ္စာပစ္စည်းများကို မတ ရားသောနည်းဖြင့် စားသုံးမှုကြောင့်၎င်း၊ (ငါအရှင်မြတ် သည်ထိုသူတို့အဘို့ ကောင်းမွန်သော အရာ များကို မြစ်တားတော်မူ ခဲ့လေသည်၊) ထိုမှတစ်ပါးတုံ ငါအရှင်မြတ်သည် ထိုသူတို့အနက်မှသွေဖည် ငြင်း ပယ်သော သူတို့ အဖို့ အလွန်ပြင်းပြ နာကျင်ဖွယ်ဖြစ်သော ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း အဆင်သင့်ပြုလုပ် ထား ရှိတော်မူပြီး ဖြစ်ပေသတည်း။ (၄း ၁၆၁)
ရည်ညွန်း – ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာဘာသာပြန်။ [http://www.quraninburmese.com/Books/Holy%20Quran.pdf]
(1) အတိုးချုံးဖို့ အတွက် အချို့ စာကြောင်းများကို […] ခံ၍ ချန်ထားသည်။ စာသားအပြောင်းအလဲ ကို [ ] ခံ၍ မြန်မာ စာဖတ်များအတွက် ပြောင်းလဲ (သို့ ) ထပ်ဖြည့်ထားသည်။ ဘာသာပြန်မူရင်းကို အထက်ပါ ရည်ညွန်းတွင်ဖတ်ရန်။
(2) ကုရ်အာန်စာပိုဒ်များရှာပေးသော နိုဗယ်ကို ကျေးဇူးတင်သည်။
(3) ဤဆောင်းပါးသည် စာရေးသူ၏ အမြင်နှင့် အာဘော်သာဖြစ်သည်။
Posted by A Muslim at 10:58 PM
Online, Burmese AttackaMinority (ဘာသာပြန်)
ဘင်္ဂလီနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အထိကရုန်း
Eleven media: အမှန်တရားဆိုတာ
ရခိုင်အရေးအခင်းအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်ချက် ဆောင်း...
မြန်မာပြည်က ဂျာနယ်တွေ -အာဃာတလား? racists လား?
မောင်တော အဓိကရုဏ်းအပေါ် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ကျောင်းသား...
မမေးလည်းဖြေ (၄) – ဘာကြောင့် ကုလားမဟုတ်ချင်တာလဲ
မမေးလည်းဖြေ (၃) – အစ္စလာမ်က ဘာသာမတူရင် သတ်ခိုင်းလား...
မမေးလည်းဖြေ (၂) – အာဖဂန်မှာ ရုပ်ပွားတော် ဖျက်တာ မြ...
မမေးလည်းဖြေ (၁) – ချစ်တီးကုလားလို မြန်မာပြည်ကိုငွေ...